लकडाउनलाई खुकुलो कसरी बनाउने ?:: Mero Desh
लकडाउनलाई खुकुलो कसरी बनाउने ?
Published on: १८ बैशाख २०७७, बिहीबार १५:१४
होटल, रेस्टुरेन्ट र पसलहरू लामो समयसम्म बन्द राख्न सकिँदैन। रेस्टुरेन्ट खोल्न दिने तर होम डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। निश्चित पसलहरू पनि खोल्न दिए हुन्छ। ग्राहकलाई निश्चित दूरीमा रहेर सामान खरिद गर्न
लगाउनुपर्छ। खुकुलो कसरी बनाउने?
लकडाउनले गर्दा उद्योग र कलकारखाना अहिले ठप्प छन्। बिस्तारै यिनलाई सञ्चालन गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो। खोल्न त खोल्ने तर कसरी भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला उद्योगपतिहरूसँग वार्ता गर्नुपर्यो। पहिले सो उद्योगले दिनमा कति उत्पादन गथ्र्यो, अहिले भएको स्रोतसाधनले कति उत्पादन गर्न सकिन्छ, माग कति छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्यो। त्यसपछि मागअनुसारको उत्पादन गर्नका लागि कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज गराउनुपर्यो। कलकारखाना चलाउनकति कामदार आवश्यक पर्छन्, त्योपनि यकिन गर्न जरुरी हुन्छ। उनीहरूलाई सुरक्षित तवरले कसरी कलकारखानासम्म ल्याउने र कसरी घरसम्म पुर्याउने भन्ने विषयमा पनि सरकार र उद्योगीबीच समन्वय हुनुपर्छ। काम गर्ने ठाउँमा आइपुग्दा पनि उनीहरूको स्वास्थ्यको पूर्ण हेरचाहको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
कलकारखानापछि खुकुलो बनाउनुपर्ने अर्को महŒवपूर्ण क्षेत्र कृषि हो। कृषि यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ सिजनअनुसार काम हुन्छ। मकै छर्ने एउटा सिजन हुन्छ। गहुँ छर्ने, धान रोप्ने सिजन हुन्छन्। समयमै खेती गरिएन भने वर्षभरि खाद्यान्न अभाव हुन्छ। कोरोनाले भन्दा पनि भोकमरीले अवस्था भयावह बनाउन सक्छ। त्यसैले कृषिका लागि चाहिने मल,बीउबिजन आदि सहज रूपमा आपूर्ति गराउनुपर्छ। अहिले गहुँ काट्ने कामदार नपाएर किसानहरू समस्यामा परेका छन्। त्यसका लागि सरकारले एउटा दायराभित्र कामदारलाई काम गर्ने वातावरण सहज बनाइदियो भने समस्या हटेर जान्छ। त्यस्तै, चामललगायत अन्न निर्यात नभएर कुहिएर बसेका छन्। तिनलाई पुग्नुपर्ने ठाउँसम्म पुर्याइयो भने शहरमा भएको अभाव पनि कम हुन्छ र अन्न पनि कुहिन पाउँदैन।
लकडाउनले बैंकिङ क्षेत्र र सेयर बजारलाई धराशायी बनाइरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था अतिआवश्यकीय क्षेत्रमा पर्ने भएकाले आंशिक रूपमा सञ्चालनमै छन्, तर पनि सेयर बजार ओरालो लागेको छ। बैंकमा रकम डिपोजिट हुन छाडेको छ। यो राम्रो संकेत होइन। बैकले ऋण उठाउन सकेका छैनन्। त्यसैले अबको विकल्पमा सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने कर्मचारीबाहेकलाई ‘वर्क फ्रम होम’को व्यवस्था ल्याउनुपर्छ र अफिस आउने कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी केही खुकुलो बनाउनुपर्छ। सेयर बजारमा पनि अनलाइन कारोबारलाई बढावा दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका काम–कारबाही पनि सहजगर्नुपर्ने समय आएको छ। निजी संस्थाको सन्दर्भमा थोरै कर्मचारी बोलाएर निश्चित दूरी कायम गरेर काम गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। लकडाउनको समयमा निर्माण कार्यहरूलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। सवारीको चाप नभएको बेला बाटो चाक्लो बनाउने, कालोपत्रे गर्नेलगायतकाम गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सुरक्षाको विषयमा पनि ध्यान पुर्याउनु उत्तिकै जरुरी छ।
होटल, रेस्टुरेन्ट र पसलहरू लामो समयसम्म बन्द राख्न सकिँदैन। होटलमै गएर खाना खाँदा संक्रमण सर्ने सम्भावनाहुन सक्छ। रेस्टुरेन्ट खोल्न दिने तर होम डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसले अवस्था पनि सामान्य बनाउँदै गर्छ, अर्थतन्त्र पनि सक्रिय हुन्छ। त्यस्तै, निश्चित पसलहरू पनि खोल्न दिए हुन्छ। तर, त्यसका लागि सामाजिक दूरी भने कायम गर्नुपर्छ। हरेक पसलमा ग्राहकलाई निश्चित दूरीमा राखेर सामान खरिद गर्न लगाउनुपर्छ।